Diego Costa oo wadahadalo La bilaabay kooxda Palmeiras.
Home Suuqa kala iibsiga Diego Costa oo wadahadalo La bilaabay kooxda Palmeiras.
Weeraryahankii hore ee Atletico Madrid Diego Costa ayaa wadahadalo kula jira kooxda reer Brazil ee Palmeiras ka dib markii uu ka tagay Wanda Metropolitano.
Costa ayaa u saftay kaliya 7 kulan Atletico qeybtii hore ee xilli ciyaareedka isagoo dhaliyay labo gool ka hor inta aan laga soo saarin qandaraaskiisa bishii Diseembar 2020 Costa wuxuu codsaday in heshiiskiisa la joojiyo
Tallaabo macquul ah oo ay ugu dhaqaaqdo Premier League bishii Janaayo ayaa ku guul darreysatay inay soo baxdo waxaana hadda Sky Sports News ay sheegaysaa in Costa uu wadahadalo kula jiro u dhaqaaqista Palmeiras kooxda uu taageeray markii uu ahaa cunug ku koray Brazil.
Haatan wuxuu ku sugan yahay Brazil wadahadalada, iyadoo Palmeiras uu u soo bandhigay qandaraas labo sano ah oo uu ugu qalmo gobolka £ 2.6m xilli ciyaareedkii.
Marca oo ku taal Argentina ayaa sidoo kale dib u soo celisay sheegashadaas xitaa wax yar ayey sii socotaa iyadoo soo jeedineysa in heshiiska la xiri karo horaanta isbuuca soo socda in kasta oo warbixinnada ka soo baxa Brazil ay sameeyeen intii karaankooda ah inay biyo qabow ku shubaan waxyaabaha.
Sida laga soo xigtay Globo Esporte, Palmeiras ayaa dooneysa inay soo galaan Costa laakiin waxay ka caga jiidayaan inay jabiyaan bangiga si ay u saxiixaan 32 jirka, kaasoo mushaarkiisa sare uu ka hor imanayo istiraatiijiyaddii ugu dambeysay ee ay ku wareejisay kooxda reer Brazil.
Previous articleBayern Munich oo ku dhawaaqday saxiixa Dayot Upamecano.
Next articleMiyuu ciyaari doonaa Gerard pique Kulanka PSG iyo Barcelona.